Archive du 12-janv-2022
Iavoloha Nifanazava ny Filoha sy ny Katolika
Noraisin’ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina tao amin’ny Biraony teny Iavoloha ireo lehiben’ny Fivondronamben'ny
Hanantena vahoaka reraka ?
Fahatapahan-jiro miha mafy. Fahatapahan-drano efa aman-taonany maro izao no nijaliana faritra maro na an-drenivohitra io na am-bala sy manamorona ranomasina rehetra any.
Lalatiana Rakotondrazafy “Lafo loatra ny fisitrahana ny CAN amin’ny TVM…”
Mitady vahaolana handefasana ny lalao CAN 2022, amin'ny haino amanjerim-pirenena Malagasy ny minisiteran'ny Serasera sy ny Kolontsaina amin'izao fotoana izao,
Paul Rabary “Mamono afo hatreto no tena ataon’ny fitondrana”
Diso be ny filazan’ny mpanohitra fa mitady seza aho, hoy ny mpahaifiarahamonina, Paul Rabary, satria tsy izaho no miantso mpanao gazety fa ny mpanao gazety no miantso ahy amin’ny maha mpamakafaka raharaham-pirenena ahy dia omeko azy ireo ny fahitako izany.
Andry Rajoelina Moa tena mahafehy ny PM sy ireo minisitra ve ?
Samy manao izay saim-pantany ny minisitra sasany ao anatin’ny governemanta tarihin’ny Praiminisitra Ntsay Christian.
Patrick Raharimanana “13 tao anatin’ny 62 taona anjaranao ka aza manilika”
“Inona no vitan'ny 60 taona hoe? 62 taona ny nahazoana fahaleovantena, ny 13 taona tao anatin'izay anjaranao. 2009 - 2022,
Ambatondrazaka Any am-ponja ilay zandary nitifitra olona
Zaranaina Christian “Havoaka afaka 2 volana ny fanafody manafoana Coronavirus”
Mitombona, raha ny zava-misy no lazaina, ny fisian’ilay “variant” vaovaon’ny Coronavirus, hoy ny mpikaroka, Zaranaina Christian.
Banky Iraisam-pirenena Nanome 41 tapitrisa dolara hividianana vaksiny
Nanolotra famatsiam-bola mitentina 41 tapitrisa dolara ho an’i Madagasikara mba ahafahana mahazo sy misitraka vaksiny hiadiana amin’ny coronavirus sy hanamafisana ny rafitra ara-pahasalamana ny Banky Iraisam-pirenena.
Andry Rajoelina “Fotoana hanitsiana izay lesoka izao”
Amin'izao fiatombohan'ny taona 2022 izao, hoy ny fampitam-baovaon’ny filoham-pirenena, Andry Rajoelina, omaly dia tonga niarahaba ahy ireo Governoram-paritra miisa 23.
Gérard Andriamanohisoa « Maoderina sy madio, ka tsy maintsy atao ny teleferika »
Efa misy ny tetibola amin’ny sosialy, ny fotodrafitrasa ara-tsosialy, ary tsy maintsy tanterahina ny tetikasa hamahana ny olana eto Antananarivo, hoy ny Minisitra lefitra misahana ny tanàna vaovao sy ny tetikasan’ny Filoham-pirenena
Raharaha volamena 49 kg Hitondra vokatra ve ireo iraka lasa any Kaomoro ?
Niazo an’i Kaomoro omaly ny delegasionina Malagasy tarihin’ny Minisitry ny fitsarana Atoa Imbiki Herilaza, ny Tale jeneralin’ny ladoany Ernest Lainkana Zafivanona,
Vahaolan’ny delestazy Fitanisana olana sy fanilihana ny rihitra hatreto
Ritina any amin’ny resaka fandorana niniana natao ny olana miseho any Andekaleka. Tsy misy mandà izany, ary adidin’ny Fanjakana sy zony ny mampisambotra ireo ambara fa tompon’antoka tamin’ny asa ratsy.
Ady amin’ny covid 19 Lasa mazoto manatona mpitsabo ny olona
Anisan’ny aretina iray tena atahoran’ny olona ny valan’aretina Covid 19 noho izy mifindra haingana be amin’ny alalan’ny piti-drora sy mamono haingana amin’ny alalan’ny fahasemporana ihany koa